﻿ यसकारण खानुहोस् भुटेको चना
यसकारण खानुहोस् भुटेको चना
चना स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । हरेक बिहान भुटेको चना खानाले शरीरलाई विभिन्न किसिमबाट फाइदा हुन्छ । यसमा पौष्टिक तत्व पाइन्छ । यसले कब्जियतबाट पनि बचाउँछ ।
बजारमा बोक्रा भएको र बोक्रा छिलेको गरि दुई प्रकारको चना पाइन्छ । बोक्रा सहितको चना खानु स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो मानिन्छ । भुटेको चनामा कार्बोहाइड्रेट, प्राटिन, क्याल्सियम, आइरन र भिटामीन भरपुर पाइन्छ ।
भुटेको चना खाँदा हुने फाइदाहरुको बारेमा पढिसकेपछि तपाईलाई प्रश्न उठ्न सक्ला, एक दिनमा कति चना खाने ? यस विषयमा बसंत कुंजस्थित इन्डियन स्पाइनल इन्जरी सेन्टरको सिनियर डाइटिसियन डा. हिमांशी शर्माका अनुसार एक स्वास्थ्य ब्यक्तिले प्रत्येक बिहान ५० देखि ६० ग्राम चना सेवन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
यस्ता छन् भुटेको चना खानुका फाइदा
प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछः प्रत्येक बिहान खाजा तथा दिउँसोको खाना खानु पहिल्यै ५० ग्राम भुटेको चना खाँदा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ । साथै यसले मौसम अनुसार शरीरमा हुने विभिन्न समस्याबाट पनि बचाउँछ ।
कब्जियत हुनबाट बचाउँछः जसलाई कब्जियत भएको छ, उनले प्रत्येक बिहान चना खानु राम्रो मानिन्छ । कब्जियत भएको छ भने पनि भुटेको चना खाँदा निकै राहात मिल्छ ।
एपेक्स हस्पिटलको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर